Amebismo (အမီဘစ်မို) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Amebismo (အမီဘစ်မို)
Amebismo (အမီဘစ်မို) ကဘာလဲ။
Generic Name: Amebismo (အမီဘစ်မို) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Amebismo (အမီဘစ်မို) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Amebismo® ကို အစာမကြေခြင်း၊ပျို့ပြီး မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ဗိုက်ရစ်ပြီးနာခြင်း၊ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ရင်ပူခြင်း၊ဒေသအပြောင်းအလဲကြောင့် ဝမ်းလျှောခြင်း စတာတွေကို ကုသဖို့အတွက် အများဆုံးအသုံးပြုပါတယ်။
Amebismo (အမီဘစ်မို) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Amebismo® ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း သုံးစွဲရပါမယ်။ သုံးစွဲရမယ့် ဆေးပမာဏအတိအကျကို သိနိုင်ဖို့အတွက် ဆေးညွှန်းကို သေချာစွာ ဖတ်ရှုပါ။ Amebismo® ကို အစာရှိသည်ဖြစ်စေ၊အစာမရှိသည်ဖြစ်စေ သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။Amebismo® မသောက်ခင် ဒါမှမဟုတ် သောက်ပြီး နှစ်နာရီအတွင်းမှာ tetracyclines အမျိုးအစားဆေးတွေ (ဥပမာ doxycycline) ကို မသောက်ရပါဘူး။ Amebismo® သောက်တဲ့အခါ ရေများများနဲ့ သောက်ပါ။ အခြားသော ညွှန်ကြားချက်တွေကို သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးပါ။ Amebismo® ကို သုံးစွဲခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မရှင်းလင်းတာတွေရှိရင် ဆရာဝန်ကို အသေးစိတ် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Amebismo (အမီဘစ်မို) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Amebismo® ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Amebismo® ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Amebismo® ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Amebismo® ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Amebismo® ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Amebismo (အမီဘစ်မို) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ဆေးမသောက်ခင်မှာ အောက်ပါအချက်တွေကို သတိထားသင့်ပါတယ်။
ဆေးကတ်ပျက်စီးနေရင်၊ပွင့်ပေါက်နေရင် ပေါက်နေတဲ့နေရာက ဆေးပြားကို အသုံးမပြုပါနဲ့။
သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပမာဏထက်ပိုမသောက်မိဖို့ အရေးကြီးသလို Amebismo® ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မရှိဘဲ ၄၈နာရီထက်ပိုပြီး မသောက်ရပါဘူး။ တကယ်လို့ သင့်ရောဂါလက္ခဏာတွေက ၄၈နာရီအတွင်းမသက်သာရင်၊ပိုဆိုးလာရင် ဒါမှမဟုတ် အဖျားပါတက်လာရင် ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ပြသပါ။
Amebismo® ဟာ သင့်လျှာ ဒါမှမဟုတ် ဝမ်းကို အညိုရောင်၊အမည်းရောင်ဖြစ်စေနိုင်ပေမယ့် ဒါဟာ ယာယီသာဖြစ်တဲ့အပြင် အန္တရာယ်လည်း မရှိပါဘူး။
ရေကျောက်ပေါက်နေတဲ့ ကလေးငယ် ဒါမှမဟုတ် ဆယ်ကျော်သက်ကလေး၊တုပ်ကွေး ဒါမှမဟုတ် အခြားသော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ရောဂါ ခံစားနေရသူတွေကို Amebismo® မတိုက်ရပါဘူး။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ရောဂါရဲ့ လက္ခဏာတွေကို ကုသဖို့အတွက် Medication ကို အသုံးပြုရင် Reye syndrome လို့ခေါ်တဲ့ ဆိုးရွားပြင်းထန်သော လက္ခဏာပေါင်းစုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေဟာ ပိုမိုထိရှလွယ်တာမို့ Amebismo® ကို ကလေးတွေမှာ သတိနဲ့ အသုံးပြုရပါမယ်။
အောက်ပါအချက်တွေရှိရင်လည်း ဆရာဝန်ကို အသိပေးရပါမယ်။
Amebismo® ရဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်ခြင်း။
အက်စ်ပရင် ဒါမှမဟုတ် အခြားသော စတီးရွိက်မဟုတ်တဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေ (ဥပမာ ibuprofen, naproxen, celecoxib) တို့နဲ့ ပြင်းထန်စွာ ဓါတ်မတည့်ခြင်း (ဥပမာ ခန္ဓါကိုယ်အနှံ့ အနီစက်များထွက်လာခြင်း၊အင်ပြင်များထခြင်း၊အသက်ရှုရခက်ခြင်း၊မူးဝေထိုင်းမှိုင်းခြင်း စသည်တို့ကို ခံစားရခြင်း)။
သွေးယိုစီးခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ (ဥပမာ သွေးမတိတ်ရောဂါ)။
အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းအနာများမှ သွေးယိုစီးခြင်း။
Von Willebrand disease ဟုခေါ်သော သွေးရောဂါတမျိုး ရှိခြင်း။
salicylate ပါဝင်သည့် အခြားသော ဆေးများကို သုံးစွဲနေရခြင်း (ဥပမာ အက်စ်ပရင်)။
အထက်ပါ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာရင် ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရပါမယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Amebismo (အမီဘစ်မို) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
သင့်တွင် ကိုယ်ဝန်ရှိလာပါက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလတွင် Amebismo® ကို အသုံးပြုခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်တွေကို သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
Amebismo® ဟာ မိခင်နို့ရည်ထဲမှာ ပါလာနိုင်တဲ့အတွက် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Amebismo® ကို မသုံးစွဲရပါဘူး။
Amebismo (အမီဘစ်မို) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဆေးအားလုံးကတော့ အနည်းနဲ့အများဆိုသလို ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူနာအများစုမှာ ပြင်းထန်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုတော့ ခံစားရလေ့မရှိပါဘူး။ အောက်ဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့ အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ပြီး အဆိုပါ လက္ခဏာတွေ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဆက်လက်ရှိနေရင် ဒါမှမဟုတ် ပိုဆိုးလာရင် ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
လျှာ သို့မဟုတ် ဝမ်းအရောင် ယာယီမည်းခြင်း (အန္တရာယ် မရှိပါ)။
အောက်ဖော်ပြပါ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ပေါ်ပေါက်လာရင် အရေးပေါ်ဆေးဝါးကုသမှုကို အမြန်ခံယူရပါမယ်။
နားထဲတွင် တစီစီအသံများ ကြားနေရခြင်း။
ဘယ်ဆေးတွေက Amebismo (အမီဘစ်မို) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Amebismo® ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အင်ဆူလင်၊methotrexate၊ valproic acid တို့ရဲ့ အာနိသင်နဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဟာ Amebismo® ကြောင့် ပိုလာနိုင်ပါတယ်။
Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors အမျိုးအစား ဆေးများ (ဥပမာ lisinopril) သို့မဟုတ် sulfinpyrazone တို့ရဲ့ အာနိသင်ဟာ Amebismo® ကြောင့် လျော့နည်းသွားနိုင်ပါတယ်။
Amebismo® ဟာ သွေးကျဲဆေးတွေ (ဥပမာ warfarin) ရဲ့ သွေးယိုစီးနိုင်ချေကို ပိုလာစေနိုင်ပါတယ်။
Salicylates အမျိုးအစားဆေးတွေ (ဥပမာ အက်စ်ပရင်)ရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဟာ Amebismo® ကြောင့် ပိုလာနိုင်ပါတယ်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Amebismo (အမီဘစ်မို) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Amebismo® က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Amebismo (အမီဘစ်မို) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Amebismo® ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Amebismo (အမီဘစ်မို) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေနဲ့ အသက်၁၂နှစ်အထက် ကလေးများ အတွက် : သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပမာဏက ဆေးပြားနှစ်ပြား (တပြားလျှင် ၂၆၂ မီလီဂရမ်စီ ပါဝင်သည်) ဒါမှမဟုတ် ဆေးရည်၃၀ စီစီကို နာရီဝက်ခြားတခါ သို့မဟုတ် တနာရီခြားတခါ လိုအပ်သလို သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ (အများဆုံး သုံးစွဲနိုင်တဲ့ ပမာဏကတော့ တနေ့ကို ရှစ်ကြိမ် ဖြစ်ပါတယ်)။
Bismatrol ၏ အားအပြင်းဆုံးပုံစံ
ဆေးရည် ၃၀ စီစီခန့်ကို တနာရီတခါ လိုအပ်သလို သုံးစွဲရပေမည် (အများဆုံးသုံးစွဲနိုင်တဲ့ ပမာဏကတော့ ၂၄နာရီအတွင်း ၁၂၀ စီစီ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Amebismo (အမီဘစ်မို) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက် ၉နှစ်မှ ၁၂နှစ်အထိ ကလေးများ : သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပမာဏက ဆေးပြားတပြား ဒါမှမဟုတ် ဆေးရည် ၁၅ စီစီကို နာရီဝက်ခြားတခါ သို့မဟုတ် တနာရီခြားတခါ လိုအပ်သလို သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ (အများဆုံး သုံးစွဲနိုင်တဲ့ ပမာဏကတော့ တနေ့ကို ရှစ်ကြိမ် ဖြစ်ပါတယ်)။
အသက် ၆နှစ်မှ ၉ နှစ်အထိ ကလေးများ : သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပမာဏက ဆေးပြားတပြားရဲ့ သုံးပုံနှစ်ပုံ ဒါမှမဟုတ် ဆေးရည် ၁၀ စီစီကို နာရီဝက်ခြားတခါ သို့မဟုတ် တနာရီခြားတခါ လိုအပ်သလို သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ (အများဆုံး သုံးစွဲနိုင်တဲ့ ပမာဏကတော့ တနေ့ကို ရှစ်ကြိမ် ဖြစ်ပါတယ်)။
အသက် ၃ နှစ်မှ ၆ နှစ်အထိ ကလေးများ : သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပမာဏက ဆေးပြားတပြားရဲ့ သုံးပုံတပုံ ဒါမှမဟုတ် ဆေးရည် ၅ စီစီကို နာရီဝက်ခြားတခါ သို့မဟုတ် တနာရီခြားတခါ လိုအပ်သလို သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ (အများဆုံး သုံးစွဲနိုင်တဲ့ ပမာဏကတော့ တနေ့ကို ရှစကိမ် ဖြစ်ပါတယ်)။
အသက်သုံးနှစ်အောက် ကလေးတွေမှာ သုံးစွဲမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ဦးစွာ တိုင်ပင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Amebismo (အမီဘစ်မို) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Amebismo® ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Amebismo® ဆေးပြား ၂၆၂ မီလီဂရမ်။
Amebismo® ဆေးရည် 525mg/15ml။
Amebismo® 525 mg/15 ml x တပုလင်းတွင် ၂၃၇ စီစီ ပါဝင်ပါသည်။
Amebismo® ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
BESMAL USES. http://www.ndrugs.com/?s=besmal. Accessed November 27, 2016
Amebismo®. https://www.drugs.com/ppa/bismuth-subsalicylate.html. Accessed
Amebismo®. https://www.drugs.com/cdi/bismuth-subsalicylate.html. Accessed